Bogga ugu weyn Hagahaaga Tallaabo-tallaabo ah ee Doorashada Qorshaha Caymiska Caafimaadka
Doorashada qorshe caymis caafimaad waxay noqon kartaa hawl culus. Waxaa jira waxyaabo gaar ah oo la tixgelinayo marka la dooranayo caymiska caafimaadka adiga iyo qoyskaaga. Maqaalkan, waxaan kuugu shaqayn doonaa iyada oo loo marayo hab-tallaabo tallaabo ee xulashada qorshaha caymiska caafimaadka.
Qorshaha caymiska caafimaadku wuxuu daboolayaa kharashaadka caafimaad ee la galay muddadii lagu jiray isbitaal qaab kasta. Waxay u yimaadaan hab gargaar maaliyadeed waqtiyada loo baahdo.
Kahor intaanan sii wadin ka hadalka sababta aad ugu baahan tahay qorshe caymis caafimaad, waxaa laga yaabaa inaad rabto inaad akhrido sababta qorshaha caymiska caafimaadku muhiim u yahay.
Maxaa Loo Doortaa Qorshaha Caymiska Caafimaadka?
Waa Maxay Faa'iidooyinka Helitaanka Qorshaha Caymiska Caafimaadka?
5 Waxyaabood oo Muhiim ah oo ay tahay in la tixgeliyo marka la dooranayo Qorshaha Caymiska Caafimaadka
#1 Nooca qorshaha iyo shabakadda bixiyaha
#2 Intee in le'eg ayaad bixin doontaa bishii si aad u hesho caymis
#3 Wax -ka -dhimista
#4 Lacag-bixin ama Caymis
#5 Daboolida Daawooyinka
Hagaha talaabo-tallaabo ah ee doorashada Qorshaha Caymiska Caafimaadka
Tallaabada 1: Dooro suuqa qorshahaaga caafimaadka
Tallaabada 2: Isbarbardhig noocyada qorshayaasha caymiska caafimaadka
Tallaabada 4: Isbarbardhig kharashyada jeebka ka baxsan
Kharashyada caafimaadku waxay culays saaraan dhaqaalaha qofka. Waxay ka weecataa ujeeddooyinka dhaqaale ee qofka. Tan waxaa u sabab ah sicir -bararka caafimaadka oo soo kordhayay, daaweyntuna ay qaali noqonayso. Waxaa had iyo jeer la sheegaa inay qiyaastii tahay 15% sanad walba.
Qorshaha caymiska caafimaadka ayaa loo baahan yahay si loo daboolo kharashyadaas. Kharashaadka caafimaad ee la galay inta isbitaalka la dhigayo waxaa daboola siyaasadaha caymiska caafimaadka. Sidaas darteed, waxay ku siinayaan kaalmo maaliyadeed oo aad loogu baahan yahay haddii ay dhacdo xaalad degdeg ah oo caafimaad iyadoo waliba ilaalinaysa lacagtaada.
Sida laga soo xigtay Daryeelka Caafimaadka.gov, caymiska caafimaadku wuxuu kaa ilaaliyaa khataraha caafimaad iyo maaliyadeed. Waxay dabooshaa dhammaan faa'iidooyinka caafimaad ee lagama maarmaanka u ah ilaalinta caafimaadkaaga iyo daaweynta jirooyinka iyo shilalka.
Ma jiro qof ku talo jira inuu xanuunsado ama dhaawacmo, hase yeeshee dadka intooda badan waxay u baahan doonaan daryeel caafimaad waqti noloshooda ka mid ah. Kharashaadkan waxaa daboola caymis caafimaad, oo ay weheliyaan dilal badan oo faa'iidooyin ah sida:
Caymiska caafimaadku wuxuu bixiyaa faa'iidooyinka caafimaad ee soo socda ee lagama maarmaanka u ah ilaalinta caafimaadkaaga iyo daaweynta cudurrada iyo dhaawacyada.
Caymiska caafimaadku wuxuu kaa ilaaliyaa kharashyo caafimaad oo aan la filayn oo xad -dhaaf ah.
Xitaa ka hor intaadan gaarin lacagta lagaa jari karo, wax yar ayaad ka bixinaysaa daryeelka caafimaadka ee shabakadda.
Haddii aad leedahay qorshe Suuqa ama caymis caafimaad oo kale oo u qalma sannadka qorshaha oo dhan ee 2018, waxaad ka reeban tahay ciqaabta dadka aan lahayn caymis ay tahay inay bixiyaan.
Doorashada qorshaha caymiska caafimaadka mararka qaarkood way adkaan kartaa. Si aad u garaacdo khiyaanada waxaad u baahan tahay inaad ka warqabto 5 qodob ee soo socda ee muhiimka ah oo la tixgelinayo ka hor intaadan dooran caymiska caafimaadka:
Waxaa muhiim ah in la ogaado qorshayaasha la heli karo iyo kuwa suurtagalka ah iyo shabakadaha adeeg bixiyaha ka hor intaadan u bixin caymiska caafimaadka.
Iyada oo ku xidhan meesha aad deggan tahay, waxaad ka iibsan kartaa caymis iyada oo loo marayo sarrifka federaalka ee HealthCare.gov ama suuqa gobolkaaga. Laba iyo toban gobol, iyo sidoo kale Degmada Columbia, waxay ku shaqeeyaan is -weydaarsigooda. Xilliga diiwaangelinta furan ee sarrifka federaalka wuxuu dhammaanayaa badhtamaha December. Haddii aad ku nooshahay gobol leh suuq u gaar ah, waxaa laga yaabaa inaad hesho waqti dheeri ah.
Ka dib markaad go'aansato nooca qorshaha iyo shabakadda bixiyaha si aad u qorto, waxaad u baahan tahay inaad ogaato qiimaha lacagta caymiska ee la bixinayo. Qaddar -caymisku waa xaddiga aad siiso caymis caymis. Waxaa badanaa la siiyaa bil kasta isla marka aad joojisid bixinta lacagaha, waxaad halis ugu jirtaa inaad lumiso caymiskaaga. Sidaa darteed, waxaa muhiim ah inaad ogaato inta la siinayo bixiyaha daryeelka caafimaadka lacag ahaan.
Lacag -jariddu waa qaddar ay tahay inaad jeebkaaga ka bixiso ka hor inta caymiskaagu uusan bilaaban. Tusaale ahaan, haddii lacagta lagaa jaray ay tahay $ 1,000, qorshahaaga caafimaad ma dabooli doono inta badan kharashaadka illaa aad $ 1,000 ku bixiso kharashyada jeebka ka baxay. Taas awgeed, waa lama huraan inaad ka hubsato caymiyahaaga si aad u ogaato haddii qorshahaagu leeyahay mid keliya, oo la jaray oo laga jaray adeegyada caafimaadka ama laga goosan karo dawooyinka si loo ogaado inta la bixinayo ka hor inta aan la daboolin daawooyinka.
Bukaan -socodka doorta qorshe leh jar -jar aad u sarreeya waxay had iyo jeer lahaan doonaan lacag -bixin bille ah oo hoose, halka qorshayaasha leh ka -goynta yar -yar ay had iyo jeer yeelan doonaan qaddar bille sare ah. Inta badan daaweynta ama daawaynta dawooyinka ma daboolayaan caymisyada ilaa laga jari karo.
#4 Lacag-bixin ama Coinsurance
Ma la socotaa kharashyo kale oo laga yaabo in lagaa rabo inaad bixiso si aad u hesho daryeel?
Ha iloobin in xitaa ka dib markaad la kulantid lacagta lagaa jaray, waxaa laga yaabaa inaad mas'uul ka tahay kharashyada dheeraadka ah ee ka baxsan jeebka sida caymiska iyo wada-bixinta.
Coinsurance - Boqolkiiba kharashyada waa inaad ku bixisaa daawo ama adeeg.
Lacag-bixin-Kani waa khidmadaha guri ee lagaa rabo inaad ka bixiso dawooyinka la qoro ama adeegyada la daboolo (badanaa lagu qoro xagga dambe ee kaarkaaga caymiska)
Daawooyinkaaga caadiga ah ma daboolayaan qorshaha caymiskaaga?
Caymis kasta wuxuu leeyahay foormulaad (liiska daawooyinka) oo uu daboolayo qorshaha. Haddii daawadu aysan ku jirin liiska dawooyinka, waxaa laga yaabaa inaan la daboolin, taasoo ku qasbeysa bukaannada inay maraan hab suuragal ah oo dheer si ay u helaan caymis. Liiska daawooyinka la daboolay ayaa sidoo kale loo qaybiyaa heerar, kuwaas oo go'aaminaya inta lacag -bixin ama caymis laga yaabo in lagaa rabo inaad bixiso. Waxaa lagaa filayaa inaad samayso liis daawooyinkaaga hadda ah oo aad isbarbar dhig ku sameysid qaacidada qorshaha si aad u hubiso in daawooyinkaaga la daboolay oo aad fahantid kharash kasta oo jeebka ka baxsan.
Halkan waxaa ah tillaabo tallaabo tallaabo ah oo ku saabsan sida loo doorto qorshaha caymiska caafimaadka:
ARAG SIDOO KALE: Caymiska Daryeelka Muddada Dheer 2021 | Faa'iidooyinka iyo Qasaarooyinka | Siduu U Shaqeeyo
Tallaabada ugu horreysa ee la qaadayo waa in la doorto suuqa qorshaha caafimaadka. Haddii shaqadaadu aysan bixin caymis caafimaad, waxaad ka iibsan kartaa suuqa dadweynaha ee gobolkaaga, haddii la heli karo, ama suuqa federaalka si aad u hesho lacagta ugu hooseysa. Si aad u bilowdo, booqo HealthCare.gov oo geli lambarkaaga ZIP inta lagu jiro diiwaangelinta furan. Waxaa laguu soo diri doonaa sarrifka gobolkaaga haddii uu jiro mid. Haddii kale, waxaad isticmaali doontaa suuqa federaalka.
Dhinaca kale, Haddii loo -shaqeeyahaagu bixiyo qorshe caymis caafimaad, uma baahnid inaad isticmaasho sarrifka caymiska dawladda ama suuqyada. Asal ahaan, shirkaddaadu waa suuqaaga.
Haddii loo -shaqeeyahaagu bixiyo caymis caafimaad oo aad rabto inaad ka raadsato qorshe ka duwan is -weydaarsiyada, waad awoodaa. Si kastaba ha ahaatee, qorshayaasha suuqa waxay u badan tahay inay aad uga qaalisan yihiin. Tani waxay sabab u tahay xaqiiqda ah in loo -shaqeeyayaasha badankoodu ay bixiyaan qayb ka mid ah khidmadaha caymiska shaqaalahooda, iyo qorshayaashu waxay leeyihiin celcelis ahaan khidmadaha guud.
Waxa kale oo aad si toos ah uga iibsan kartaa caymis caafimaad caymis ama isweydaarsiga gaarka ah. Uma qalantid dhibco canshuureed oo lacag-bixin ah, kuwaas oo ah qiimo-dhimis ku saleysan dakhliga ku-soo-aadintaada bil kasta haddii aad doorato xulashooyinkaan.
Markaad raadinayso qorshooyinka caymiska caafimaadka, waxaa hubaal ah inaad la kulmi doonto maraqa alifbeetada; noocyada ugu badan ee siyaasadaha caymiska caafimaadka waa HMOs, PPOs, EPOs, ama POS qorshayaasha. Nooca aad doorato ayaa go'aamin doona kharashyada jeebkaaga ka baxay iyo dhakhaatiirta aad arki karto.
Markaad isbarbardhigayso qorshayaasha, raadi faa'iidooyinka kooban. Goobaha suuqyada tooska ah waxaa caadi ahaan ka mid ah isku xirka kooban iyo sidoo kale qiimaha u dhow cinwaanka qorshaha. Tusaha adeeg bixiyaha, kaas oo taxaya dhakhaatiirta iyo rugaha caafimaadka ee ku jira shabakadda qorshaha, ayaa sidoo kale la heli karaa. Haddii aad marayso loo -shaqeeyahaaga, ka codso soo -koobidda faa'iidooyinka maamulaha faa'iidooyinka goobta shaqada.
Haddii aad dooratid qorshaha HMO ama POS, oo u baahan gudbinta, waa inaad aragtaa takhtarka daryeelka aasaasiga ah kahor jadwalka habsocodka ama booqashada takhasusle. Sababtan awgeed, dad badan ayaa doorbida qorshayaal kale. Xayiraadaha dartiis, si kastaba ha ahaatee, HMOs waa nooca ugu jaban qorshaha caafimaadka, guud ahaan.
Qorshayaasha POS iyo HMO ayaa laga yaabaa inay kugu habboon yihiin haddii aadan ka fikirin dhakhtarkaaga asaasiga ah inuu kuu doorto takhasusleyaal, xiriirinta booqashooyinka, iyo qabashada diiwaannada caafimaadka. Haddii aad dooratid qorshaha POS oo aad ka baxdo shabakadda, hubso inaad dhakhtarkaaga u soo gudbiso ka hor waqtiga si loo yareeyo kharashaadka jeebka ka baxsan.
Haddii aad doorbideyso inaad doorato khabiiro kuu gaar ah, waxaad doorbidi kartaa PPO ama EPO. EPO ayaa laga yaabaa inay kaa caawiso inaad kharashyada hoos u dhigto haddii aad ka heli karto bixiyeyaasha shabakadda; Tani waxay u badan tahay aag weyn oo metro ah. PPO waxaa laga yaabaa in la doorbido haddii aad ku nooshahay meel fog ama miyiga oo ay ku yar tahay helitaanka dhakhaatiirta iyo daryeelku, maadaama lagugu khasbi karo inaad ka baxdo shabakadda.
Tallaabada 3: Isbarbar dhig shabakadaha qorshaha caafimaadka
Markaad booqato dhakhtarka shabakadda dhexdeeda, kharashyadaadu way hooseeyaan maxaa yeelay shirkadaha caymisku waxay kala xaajoodaan qiimayaasha hoose shabakadaha. Markaad ka baxdo shabakadda, dhakhaatiirtu kuma heshiiyaan qiimayaal la isku raacsan yahay, markaa inta badan waxaad ku jirtaa jillaab qayb weyn oo biilka ah.
Haddii aad dooratay dhakhaatiir oo aad doonayso inaad sii aragto, hubi inay ku qoran yihiin tusayaasha bixiyaha qorshaha gaarka ah ee aad ka fekereyso.
Haddii aadan lahayn dhakhtar la doorbiday, raadi qorshe leh shabakad weyn si aad u hesho xulashooyin badan. Shabakad weyn ayaa aad muhiim u ah haddii aad ku nooshahay bulshada miyiga ah maadaama aad u badan tahay inaad hesho dhakhtar deegaanka ah oo qaata qorshahaaga.
Ugu dambayntii, haddii ay suurtogal tahay, tirtir qorshe kasta oo aan lahayn dhakhaatiir shabakadda gudaha ah iyo kuwa leh ikhtiyaar bixiyeyaal aad u yar marka la barbar dhigo qorshayaasha kale.
Akhri ALSO: Sida Tobnaad Loo Bixiyo Marka Deynta Lagu Leeyahay | Tilmaan Buuxo iyo Talooyin
Waa kan meesha lagaa filayo inaad isbarbar dhigto kharashka laga jari karo, wada -bixinta, iyo kharashka caymiska caymiska caafimaadka. Kharashaadkaaga ka baxsan jeebka ayaa ka badan doona haddii lacagta caymiskaagu hooseeyo.
Kharashaadka jeebka ka baxsan waxay aad ugu dhow yihiin qiimaha shabakadda. Soo koobista faa'iidooyinka qorshe kasta waa inay si cad u sheegtaa inta ay tahay inaad jeebka ka bixiso adeegyada. Websaytka suuqa federaalka, iyo sidoo kale suuqyo badan oo gobolka ah, ayaa bixiya sawirro kooban oo ku saabsan kharashyadan marka la barbardhigo.
Inta lagu jiro tallaabadan, waxaad yareyn kartaa xulashooyinka ku saleysan kharashaadka jeebka ka baxsan. Qorshe bixiya qayb sare oo ka mid ah kharashyada caafimaadkaaga, laakiin leh lacag -bixinno bille ah oo ka sarreeya, ayaa laga yaabaa inay ka sii fiican tahay haddii:
Waxaad marar badan aragtaa takhtar asaasi ah ama takhasusle
Waxaa jira suurtagalnimada sii kordheysa ee xaaladaha degdegga ah ee caafimaadka
Waxaad qaadataa daawooyin qaali ah ama magac leh maalin kasta.
Waxaa jira qalliin soo socda
Waxaad sugaysaa ilmo, qorshayso inaad ilmo dhasho, ama aad yeelato carruur yaryar.
Waxaa lagaa helay cudur raaga sida sonkorowga ama kansarka.
Qorshe leh kharashaad badan oo jeebabka ka baxsan laakiin lacag-bixinnada bishii oo hooseysa ayaa laga yaabaa inay tahay ikhtiyaar ka fiican haddii: aadan awoodi karin inaad bixiso khidmadaha billaha ah ee sarreeya oo leh kharashyada jeebka ka hooseeya.
Tallaabada 5: Isbarbardhig faa'iidooyinka
Marxaladan oo fursadahaaga la jaray dhawr, si taxaddar leh u dhex mari faa'iidooyinka kooban ee fursadaha u haray si aad u aragto haddii mid ka mid ah qorshayaasha ay daboolaan baaxadda adeegyada.
Qaar baa laga yaabaa inay si fiican u daboolaan daaweynta jireed, daaweynta bacriminta, ama daryeelka caafimaadka dhimirka, halka kuwa kale ay yeelan karaan caymis degdeg ah oo ka fiican. Muujinta dookhyadaada ayaa kaa caawin doonta inaad doorato qorshe fiican oo adiga iyo qoyskaaga ah.
Markaad hoos u dhacdo dhowr ikhtiyaar, halkan waxaa ah dhowr su'aalood oo muhiim ah oo la isweydiiyo:
Daawada gaarka ah ee aan qaato ma ku hoos jirtaa qorshahan?
Waa kuwee dawooyinka xaaladdayda ee ku hoos jira qorshahan?
Waa maxay adeegyada hooyada ee la daboolo?
Maxaa dhacaya haddii aan xanuunsado markaan u safrayo dibadda?
Sideen ku bilaabayaa is -qoritaanka, iyo dokumentiyada aan u baahan doono?
Kaliya inaad iibsato qorshaha caymiska caafimaadka ee ugu fiican adiga iyo qoyskaagaba kuma filna. Hubi inaad dib u eegto caymiskaaga sanadkiiba mar si aad u hubiso inay weli ku habboon tahay baahiyahaaga. Tusaale ahaan, haddii aad guursato ama aad ilmo dhasho, waxaad leedahay xubin qoyskaaga ka mid ah oo ay tahay in lagu daro caymiskaaga. Ku dar xubinta midkood muddada siyaasadda ama waqtiga cusboonaysiinta.
Dib -u -eegista joogtada ah ee caymiskaaga ayaa xaqiijineysa inay ku habboon tahay dhammaan heerarka noloshaada. Intaas waxaa dheer, qorshayaasha caymiska caafimaadku waxay bixiyaan caymis inta ka dhiman nolosha qofka. Markaa, cusboonaysii siyaasaddaada waqtigeeda, mar kasta, si aad u hubiso inaad haysato caymis joogto ah haddii ay dhacdo xaalad degdeg ah oo caafimaad.
nerdwallet.com -Hagahaaga Tallaabo-tallaabo ah ee Doorashada Qorshaha Caymiska Caafimaadka
realsimple.com - 7 Waxyaalood oo ay tahay in la tixgeliyo marka la dooranayo Qorshaha Caymiska Caafimaadka
npr.org- Diiwaangelinta Furan waa tan: 6 Talooyin oo Ku Saabsan Doorashada Qorshaha Caymiska Caafimaadka
medicineassistancetool.org- 5 Waxyaalood oo ay tahay inaad tixgeliso marka aad dooranayso caymiska caafimaadkaaga
Maxay Caymiska Baabuurku ugu qaalisan yihiin 2021?
11 Siyaabaha Ugu Raqiisan Oo Lagu Helo Caymiska Caafimaadka 2021
Dib -u -eegista Caymiska Caafimaadka Oscar 2021: Ma Xalaalbaa Mise Waa Fadeexad | Siduu U Shaqeeyo
7 Caymiska Caafimaadka ugu Fiican Texas 2021
10 Meelood oo Raqiis ah oo lagala Soo Xiriiro Xiriirada khadka tooska ah sanadka 2022 | Eeg Qiimaha
Lensiska indhaha ayaa xad dhaaf ah. Mahadsanid, waxaa jira meelo aad ka iibsan karto xiriirada ugu jaban onlayn oo aad weli kaydsato…
Waa Kuwee Kalkaaliyaasha Kalkaalisada Maskaxda Ee Ugu Mushaarka Badan? | Dawladaha ugu sarreeya 2022 -ka
Xirfadlayaasha kalkaalisada dhimirka ayaa door weyn ka ciyaara nidaamka daryeelka caafimaadka dhimirka. Caafimaadka maskaxda waxaa lagu sixi karaa…
10 Qorshayaal Wadaag Caafimaad 2022 | Beddelka Caymiska Cusub
Maalgelinta caymiskaaga caafimaad ma aha hawl fudud in la gaaro. Taasi waa sababta qorshaha caymiska caafimaadku…
10 Degenaanshaha Ugu Mushaharka Badan | Takhasusyada Ugu Fiican
Arday badan oo caafimaad ayaa raba inay ogaadaan inta ay jiri doonto degenaanshaha caafimaad. Waa maxay dhab ahaan degane caafimaad? Kahor…
Dib -u -eegista Habka Dib -u -eegista: Adeegyada & Soo -jeedimaha | Sharci ama Fadeexad
Aragga waa arrin murugsan oo muhiim u ah nolosha oo dad badani mararka qaarkood iska indha tiraan. Inta badan dhakhaatiirta iyo dhakhaatiirta indhaha…